POEM LOVER: May 2009
ပန်းဇင်း ဂေါင်းဗျောင် (1)
လေးဝတီ ခိုင်ကျော် (1)
မေတ္တာခေါင်းပါး နွီရွာကြားမှာ... အဝတ်စား ဗလာ၊ ငါလျှောက်လာလည်း...။ အကြင်နာခေါင်းပါး နွီရွာကြားမှာ... အစားစာ ဗလာ၊ ငါလျှောက်လာလည်း...။ေ...
ရခိုင်ပြည်က ဗဟိုစည်ကို အမောင်လွယ်ပြီး လာတီးပါ တော်ဝင်ရေသဇင်ပန်း ပန်ဆင်ထိုက်စွာလည်း အကျွန်ရို့ပါအမောင်။ အမောင် ခေါ်ရေ (New York) အမောင်ေ...
ပန်းမြတ်သဇင် ဦးထိပ်တင် မဟာမုနိ ရွှေပလ္လင် မွီးမိခင် ဆုမွန်တောင်း ကျမ္မာစီကြောင်း သာစီကြောင်း --။ သဇင်ပန်းခိုင် တမြိုင်မြိုင် ဗျာဒိတ်ရရေ ပြည်ရ...
ရခိုင်အဆိုတော် ဝင်းကိုခိုင်၏ တေးစီးရီးသစ် “အာရက္ခမြီ” ကို ကိုယ့်ဘလော့မှာ ထည့်ချင်ကေ အေနိန်ရာ (Fileden)ကို Click နှိပ်လို့ ( Mediafire ) ကုတ်ကိုဒေါင်းယူပါ။ ပြီးကေ ယင်းကုတ်ကို ကော်ပီကူးလို့ AddaGadget > Edit HTML မှာလားလို့ Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ဇာကြောင့်လဲ့ ဂု ...။
က၀ိ ပညာကျော် တစ်ယောက်
"၀" လုံးတောင် မရွီးတက်စွာ
ပင်မြင့် က တော်ဝင်
အ-ရှေ့က နိန်ဝန်းထွက်ရေပိုင် ‘အာယှ’ တစ်ခွင်ကို
အလင်းရောင်ပီးလို့ ‘အာယှ နိန်ဝန်း’ လို့
ဥ-တုဂီမန္တမာ ဖနပ်မပါ ထီးဗလာနန့်
သောက်ရီနတ္ထိ ခိုစရာမဟိဖြစ်နိန်ရေ ပြည်သူတိအတွက်
အသက်ကိုစတေးပနာ ခို၊သောက်၊နားရာ အရိပ်ဆာယာကို
“အဝေ..ဂရက်ဒေါက်! ငါ ရို့ပြည်က အဂုထွက်လားလီ” လို့
မ-တရားအုပ်ချုပ်မှုကို ခေါင်းငုံ့မခံ ဇာတိမာန်နန့်
အသျှင်ထွန်းညှိပီးခရေ မီးကိုသုံးပနာ အခြားလူတိ
အသျှင်မွီးရာ ပြည်ရက္ခာမာ စားစရာမဟိ နိန်စရာနတ္ထိ
အဂုအထိ ငရဲအတိပိုင်ဗျာယ် “အသျှင်”။
‘The Light of Asia’ ဟု
တ္တ -စ်ခွန်းချေမျှ မဟဝံ့ဘဲ
ကြွီးမြီတိ တခရွီနန့် --။
ဒုက္ခကို လွှတ်ထားမိကတ်စွာ --။
ဇာပယှောင် ဖြေသာဖို့လဲယေ --။
အတိတ်က ပေါများခရေ တိုင်းပြည်
အတိတ်က ထိတ်ဆုံးဖြစ်တေ တိုင်းပြည်
အခု... နှိုင်းလီကေ ဘိတ်ကျ
ဘ၀ချေ နီဝင်မလားခင် --။
နှုတ်မရရေ ခြီနှစ်ချောင်းကို ဆွဲမ,ယင်း
ခါးစီးခံရကတ်စွာက မဆန်းဗျာယ် --။
ပြန်ဗျာယ် မာမာလာကတ်ရရေမလား --။
(အဖရခိုင်ပြည်နန့်ဝီးကွာနီရရေ သူငယ်ချင်းရဲဘော်အပေါင်းအား ဦးထိတ်ထားလျှက်)
ဘလော့ဂ် က,ကွက် ။ ။
Wanlet (Lay Waddy)
“ယခိုင်” “ယခိ” ရာဆို
မျိုး“ခြစ်”စွာကို သိပါရေ --။
ပန်းကုံးစွပ်လို့ င်္သဂြိုဟ်ပါဖို့ --။
မိန့်ဂွန်ဆောင်လို့သိမ့် ... ။
နောက်ကုန်းကို " အုန်း " ခနဲမြည်မ
စစပ်ချေတွိယင့် ... ။
ထိုင်စောင့်နီဖို့သိမ့်လား ... ။
ဇာခါမြင်ခီရဖို့ .... ။
မှတ်ချက်။ ။ ရခိုင်မဂ္ဂဇင်း၌ မြန်မာဘာသာဖြင့်ရွီးထားသည်ကို ရခိုင်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မာန်တင်းရိုးမ၊ ကြည့်မ၀တည်း --။
လှုပ်လျှားသွီးနီ၊ စည်းလုံးညီ၏ --။
အမျိုးချစ်စွာမှာလည်း မြန်မာစကားဖြင့်မချစ်ဘဲ ရခိုင်စကားဖြင့်ချစ်ရန်လည်း လိုအပ်မည်ဟုထင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ရခိုင်မဂ္ဂဇင်းဟုခေါ်သော မဂ္ဂဇင်း၌ မြန်မာစကားဖြင့်ရွီးထားသည်ကို ရခိုင်စကားဖြင့်ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။“ခမ်းနားထည်တုံး၊ ဝင့်ကြွားတုံး…” ၌ “တုံး”ဟူသောအဓိပ္ပါယ်သည် “အသုံးမကျ၊ ပြီးဆုံးလားသည်၊ မျိုးတုံးလားသည်” စသည်မှာသာလျှင်သုံးသင့်သည်ဟု ဦးဇင်းထင်မြင်မိပါသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် အထက်ပါစာပိုဒ်သည် ယင်းအဓိပ္ပါယ်မျိုးကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ “ဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆက်လက်ရှင်သန်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသောကြောင့် “ခမ်းနားထည်တုံး၊ ဝင့်ကြွားတုံး” အစား “ခမ်းနားထည်တုန်း၊ ဝင့်ကြားတုန်း” ဟုသာသုံးသင့်သည်ဟုဦးဇင်းယူဆပါသည်။)
(ဒေါ်လာစစ်မြီပြင်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နိန်ကတ်တေ အမျိုးကောင်းသမီးရို့အတွက်ဂဏ်ပြုပါရေ။)
မြို့ရိုးနန်းက၊ ကျီ-ပြ၊ တံတိုင်း
(မှတ်။ ။ “သူ့နေရာသူ့ဒေသ” ကို “သူ့နိန်ရာသူ့ဒေသ”
“ရှည်လျှားပေတံ၊ အခြေခံနန့်” ကို “ရှည်လျှားရေ ပေတံ၊ အခြီခံနန့်” လို့ပြောင်းသုံးလိုက်ပါရေ။
ထိန်ထိန်သာ မီးတိုင်းအောက် လိုသည်မယ်မဟိရ
စီမံကာ ဖြည့်လို့ ၊ တစ်ဆောင်လုံး ဗျာများ
လာသူလမ်း အညောင်းဖြေ စိတ်တော်ပြယ်လန်းစီးဖို့
ရွှေခြေထိုး လွန်းရာချိတ်က ပိုလှနှီဖို့လား
ယဉ်စစ ပုလဲကွန့် နံသာသွီး အဆင်ပေါ် ပိုးပုဝါ ထပ်ကာဆင့်
သောကများ ဗျာပါ မမောနိုင် မပမ်းနိုင်
ပါးသွီးနီင်္နီင်္ ဗိုလ်ပြည်ဖြစ် သုံးလို့ရာ
တွေးရုံနှင့်မပြီး စမ်းဝတ်ရ ချွတ်ရလိုက်နန့်
စားဖိုဆောင် မီးလည်းတိတ် အဆောင်တောင် ပိတ်ဗျာလ်
အီးနီရေ ထမင်းဝိုင်း ညိုးနီရေ ပန်းကြားမှာ
မလှုပ်ဝံ့ သစ်လွင်ရေ ၀တ်ရုံဖြင့်
အရှက်ရစီအောင် အထိန်းတော် မိတ်သံ ကြားမှာ
မဖော်သာ ငိုမယ့်မျက်နှာ ၀ှက်လို့ အသည်းမှာ လွမ်းနာကျ
ချစ်စကားဆိုမည့် နှုတ်ခမ်း နီသွေးရေ နှစ်လွှာက
အီးစက်ရေ ထမင်းဝိုင်း လားနိုးနန့် မျှော်သူအပြစ်
စည်ဗဟို သုံးချက်အတီး ရင်ထဲက စကား
အေနီလည်း မောင်တော်မလား … ။
လွမ်းပါယင့်လည်း အလွမ်းညက မကုန်နိင်
မဖြေသာ စိတ်တော်ငယ် နွမ်း
ပန်း ရီချမ်း ဆီမီး ပူဇော်ပါလည်း
ခိုကိုးရားမယ့် တောင်းဆုတော် ပြုမိရေ...။
သက်ပြင်းက အကြိမ်တစ်ရာ လှူးလို့ရာ
အိပ်မပျှော် ရင်မှာ အလွမ်းပို စွာထင်...။
သည်းခြေပင်ထိတ် ညယံဝယ် ဆိတ်ပါလို့
ကိုယ်ပုဝါ မျက်ရည်တော် စိုရွဲ့လို့
“မျက်နှာတော် သစ် ၀တ်ရုံတော်လှဲမယ်
မျောက်သားတော်ဆီ အခစား ၀င်မယ်။
၂၁ ရာစု ရောင်စုံညဉ့်မှာ
မျက်ရီတိ စီးနီရေ မြစ်
သွီးနန့် ထုဆစ်ထားရေ လယ်ကွင်းတိ
ဘ၀တိ တို တိုပါလတ်ဗျာယ်…။
ရိုး အ,ရေ ငရို့တိ
ဆားမရ၊ ရီမရ ခံဖိ ...။
မလောက် င,ရေ ငရို့ဘ၀ ...။
ဒေ လူဆိုး၊ သူခိုးတိ
ဇာခါ ကျီဖို့လေ့ချင့် ...။
လွမ်းယင်း ငေးယင်း --။
(မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာပိုင်ရွီးထားခြင်းကို ရခိုင်ပိုင်ပြန်ရွီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဖြတ်သန်းဝံ့ရဲ လျှောက်မြဲငါ --။
(မှတ်ချက်။ ။မူရင်းမြန်မာပိုင်ရွီးထားခြင်းကို ရခိုင်လိုပြန်ထားသည်။)
(မှတ်ချက်။ ။ ရွီးသူနာမည်ကိုမိလားခပါယာ။)
၂။ ပန်းမွိ့ရာမှန်၊ ကေသာစံနန်း
၃။ မွှီးပျံ(ပြန့်)သင်းကြိုင်၊ ရနံ့လှိုင်ဖက်
၄။ သဇင်နှမ၊ ဆန်းစလထွက်
၅။ မယွန်း ဖောက်ပြန်၊ မူမှန်မျိုးရိုး
(မှတ်ချက်။ ။ မူရင်းမြန်မာပိုင်ရွီးထားရေ ကဗျာကို ရခိုင်လိုပြန်လိုက်ပါသည်။)
ယင်းပိုင်ဆို မလွရ --။
ယင်းပိုင်ဆို ခိုးမစားသင့် --။
ယင်းပိုင်ဆို ကတိတည်လေ --။
ယင်းပိုင်ဆို ကျမ်းကိုင် --။
ပေါက်ကြားလားဖို့နန်းရာ ဘုချေ --။
အဘာလေ အဘာ ... !
မ မ နန့် ဗျ ရာကျန်ဗျာယ်လတ်
လမင်းကြီးက ငါ့ကို ပျက်ရယ်ပြု
Mg Tha Hla
၄:၄၄ am>၆:၁၁ am
(ကိုပြည်ကထွက်စွာတိကို အားလုံးကိုယူပနာ အမြင်ကောင်အောင်လမ်းဆိုး..တာဆိုးလုပ်ပီးစွာနန့် ကြေနပ်နီရရေ ရခိုင်းသားရို့ဘဝကိုခံစားဖွဲ့ဆိုလိုက်သည်..။)
Burmese Meeting Point ထင်လို့များ
မှတ်ချက်။ တော်လှန်ရီးလုပ်စားနီရေလူတိကို မဆိုလို.. ပြည်ချစ်စိတ်နန့် ကိုယ့်အသက်ကိုလှူပနာ ..ကိုယ်ကျိုးစွန့်နီကတ်တေ... မြင့်မြတ်ဇာနည်တိကိုဆိုလိုပါရေ...။
“သူ့အားချစ်ဖြေ ပီးလိုက်သည်”ဟုဆိုလာ၏ ..။
Independent Arakan Kingdom လို့
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ပေါ်ခရေ ငါရို့ရက္ခိုင်....။
December 31, 2006 ... 11:00 PM
ပြဿနာတိနန့်ရာ ပြည့်လို့ နိန်လီဖို့ယေ...။
Heater ဆိုစွာ ဖြူလား၊ မဲလား
မမြဲခြင်း သင်္ခါရ နိယာမထဲက
နီကောင်းအောင်ရာ နီပါလီ အမိ...။
အဝေ ! ငါ့သား
အမိလိပ်ပြာသန့်ရေဝေ ။ ။
စွမ်အင် သတ္တိ တစ်မျိုး
ငါရကေ ကောင်ဖို့ နှ..။
ရခဲ့ရေ လူဘ၀ တစ်ချက်ချေမာ
ငါ နိန့်တိုင်ပြောပြချင်ရေ ...။
ဆန္ဒ နန့် ပစ္စုပ္ပန်
ငါ တွေးမိယင့် ...။
ကူပါ ကယ်ပါ တစာစာနန့် 
ရောင်နီဦးကို ဆန္ဒပြုယင်း ခရီးဆက်
ထ ထ ဟောင်တတ်တေ ခွီးပိုင်
တ၀ီဝီအော်နိန်ရေ ဆောင်းလီပြင်းနန့် 
မင်းကို လွမ်းနိန်ရေ လခြမ်းချေ …….။
ကုန်းရီစုတ်နိန်ရေ ပစ္စက္ခနန့် 
ဘ၀ကို ကြိုးညှိပနာ တီးကြည့်ရေ
ယကေလေ့ မင်းကို ငါ လွမ်းရေ လခြမ်းချေ…….။
အငိုမတိတ်သိမ့်ဝေ လခြမ်းချေ…….။ ။ ။
မကြားဖူးစွာ ကြာလို့ 
မတန့် တမ်းစီးဆင်းလားနိန့် ယင့် ……၊
ငါရို့ တိ …. ငါရို့ တိ
နှလုံးသားအလင်းဟိစွာ ကျိန်းသီရေ။ ။ ။
အသားနာဖို့ စွာကိုကြောက်လို့ 
နီဝင်နီထွက်ကို ကော်ဆဲလို့ 
ပြောင်းလဲခြင်းတရားက လက်တို့ လို့ ခေါ်ပနာ
ကမ္ဘာ့ရွာသစ်ကို ဖွင့်လို့ ပြလိုက်တေနိန့် 
နောက်မကျသိမ့်ဆိုရေ အသိနန့် 
ငါ့ပိုင် ကံကြမ္မာကိုမပိုင်ရေ လူ
ငါ့ပိုင် အနာဂတ်ကိုမျှော်မကြည့်ခရေ လူ
ငါ့ပိုင် မျိုးဆက်သစ်ကို မချစ်တေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ့်စံကိုယ့်ဟန်ကို မမြတ်နိုးခရေ လူ
ငါ့ပိုင် ဘ၀တထွာချေမှာ အဆီယစ်ပနာ အမျိုးကိုပစ်ခရေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ်ပိုင်ရေနိုင်ငံကို ပြန်ပနာမထူထောင်နိုင်ခရေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ့်ဝိဥာဉ်ကို ကိုယ်သစ္စာဖောက်တေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ့်သိက္ခာကို ကိုယ်မလေးစားရေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းနန့် ကိုယ်မလားခရေ လူ
ငါ့ပိုင် ကိုယ့်စာပီစကားကို တန်ဖိုးမထားခရေ လူ
ငါ့ပိုင် လူကို ရခိုင်သားလို့ မသတ်မှတ်လီပါကေ့...။
သာလိကာကား ရခိုင်လား --။
တနိထက်တနိ တရက်ထက် တရက်
တောထွက်ခန်း ကဆိုခါ --
(ရခိုင်ပြည်တော်လှန်ရေးမှာ မောင်ဝိုင်းချေတိများနီသိမ့်လို့ ရခိုင့်တော်လှန်ရေးကြီး ပျက်စီးနီရပါသည်။)
ရာစုနှစ် (၂) လီဖြတ်သန်း
ကိုယ်ရို့ ရာ ပိုင်ဆိုင်ချင်
အသည်းကို လှီးဖြတ်စွာပိုင် အခံရခက်လို့
ယိုင်လဲပြိုပျက်နီရေ ပြည်ကြီးရခိုင်က ထွက်ခွာ
ဖက်ခွက်ကို လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်မောင်းထုတ်ခြင်းမှတပါး
တခြားမဟိ ယုံကြည်ခလို့ --။
ယုံကြည်မှုတူလို့ ဦးတည်ချက်တူရာ စုဖွဲ့
တွိခကတ်ဗျာ မဟုတ်လား --။
ငါ-မှ-ငါ ဒေါမာန်ခင်းလို့ 
ပရမတ်နန့် ၀ီးကွာကတ်ရရေ --။
၁၁၄၆ - က ဒေကနိထက်တိုင်
အမှန်ပင် ဖြစ်နိုင်ဖို့လားယေ ---။
နှစ်ကောင်စလုံးကို သတ်လို့စား --။
ဂြိုးညိုနားကေ ဇာကိုလားလို့ဖြေရမည် --။
ရွှီမြို့မြောက်ဦး အောင်သံကျူး --။
စည်တော်လည်းတီး မင်္ဂလာ --။
အခု နရန်းလန် --။
ကောင်းရာသုဂတိ လားစီဖို့ ---။
နီမြန်းသော ပတ္တမြား ---။
(အကြံပီးကြီး - နယကကြီး)
အဖွဲ့အစည်း (၂) ခု၏ယုန်းခန်း၌